समाचार – Page2– Nepalaya Times
Jun152022 by Nepalay TimesNo Comments
यीनै हुन् गगन जो विद्यालय हिँडेको पाँच मिनेटमा डोजरको सिकार बने!
मुसिकोट नगरपालिका २ का १४ वर्षीया गगन रायमाझीले झोला बोकेर घरबाट विद्यालय निस्किएको पाँच मिनेट नहुँदै डोजरले फालेको ढुंगाले लागेर ज्या’न गुमाए । उनी मुसिकोट नगरपालिका ३ को पृथ्वी माविमा कक्षा ९ मा पढ्थे । घ’टना सुनेर आमा कल्पना रायमाझी अझै मूर्छित छन् । हुर्केको एक्लो छोरा गुमाउँदा बुबा हरिबहादुर रायमाझीका आँखा ओभाएका छैनन् । सिंगो विद्यालय शोकमा छ । शुक्रबार गगनको शोकमा पृथ्वी माध्यमिक विद्यालय बन्द गरियो ।‘गगनको चन्चलता सम्झिएर विद्यालय बस्नै सकिएन । ठूलो सम्भावना भएको साथी गुमाएका छौँ,’गगनका साथी निशान्त घिमिरेले भने,‘परिवारमा अझै कति पीडा भएको होला । गगन सधैँ साथीहरूसँग विद्यालय हिँड्थे । बिहीबार पनि साथीहरूसँग नै थिए । तर, अरूभन्दा केही अगाडि । एक्कासि डोजरले पल्टाएको ढुंगाले गगनलाई लाग्यो । उनी अचेत भएर सडकमा पल्टिए । साथीहरूले केही पर भएकी पृथ्वी माविकी शिक्षिका सम्झ
Jun122022 by Nepalay TimesNo Comments
काठमाडौं । गुण्डाहरूले सबैभन्दा सुरक्षित मानिएको काठमाडौंको दरबारमागमा फेरि उत्पात मच्चाउन थालेका छन् । बिहीबार बिहान करीव साढे ३ बजे काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित प्लाटिनम डिस्कोमा बालुवाटारका प्रतिकभाष्कर सिंहलाई सांघातिक आक्र'मण भएको छ । सिंहलाई काभ्रेली गुण्डाहरूको समूहले आक्रमण गरेर घाइते बनाएको हो । आक्रमणकारीहरू फरार छन् । प्रहरीले ती आक्रमणकारीहरूको सुइको समेत पाएको छैन । काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको भुम्लु गाउँपालिकाका डलर लामा, नवबुद्ध नगरपालिकाका सञ्जय लामा, रोशी गाउँपालिकाका कुलध्वज लामासहितको १० जनाको ग्याङले फिल्मीशैलीमा सिंहलाई कुटपिट गरेको सीसीटीभीको फुटेजमा हेर्न सकिन्छ । सिंहलाई आक्रमण गर्ने समूह गुण्डा नाइके जितेन्द्रमान तामाङ उर्फ ‘दावा लामा’को ग्याङ हो । दावा लामा भुम्लु गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेस र सत्ताको आडमा आफ्ना सुण
Jun112022 by Nepalay TimesNo Comments
नुवाकोटमा ६ घण्टादेखि विद्युत प्रशारण लाइनमा पुरुष : ‘मासु भात दिँदा पनि तल झरेनन्’
नुवाकोटमा एक पुरुषले विद्युत प्रशारण लाइनको तारमा झुन्डिएर हैरानी खेलाएका छन् । शनिवार बिहान ९ बजे विद्युत प्रशारण लाइनको टावरबाट तारमा पुगेका उनी ६ घण्टादेखि तारमा हिँडिरहेको स्थानीय जयबहादुर तामाङले बताए । उनी नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका १३ घले गाउँका माइला विक हुन् । विक २ सय २० केभीको प्रशारण लाइनमा हिँडिरहेका छन् । उनी परिवारसँग झगडा गरेर बिजुलीको तारमा पुगेको स्थानीयले बताए । रातोपाटीसँग टेलिफोनमा कुरा गर्दै स्थानीय जयबहादुर तामाङले भने– ‘बिहान ९ बजेतिर तारमा पुगेर हिँड्न थालेछन् । हामीले तल भुइँमा मासु भात ल्याएर खान आउ भन्दा पनि अझै तारबाट ओर्लिएका छैनन् । २ जना पुलिस र चार पाँचजना स्थानीय छौँ । जति अनुरोध गरेपनि झर्न मानेका छैनन् ।’ उनले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि उद्धारका लागि अनुरोध गरेको बताए । मानसिक सन्तुलन गुमाएका उनले बिहान परिवारलाई खुकुरी देखाएर झग
Jun102022 by Nepalay TimesNo Comments
काठमाडौं । भारतीय सुपरस्टार सलमान खानको ह'त्या प्रयास भएको छ । सलमानमाथी गोली हानेर ह'त्या भएको भारतीय मिडियाहरुले उल्लेख गरेका छन् । ग्याङस्टर लरेन्स बिस्नोइका सार्पसुटरले शुक्रबार मुम्बईमा सलमानमाथी आ क्रमणको प्रयास गरेको बताइन्छ । सलमानविरुद्ध पनि पञ्जाबी गायक सिद्धू मुसेवालाको हत्यामा संलग्न ठानिएको बिस्नोइ ग्याङका केही सार्पसुटर लागीपरिरहेको टाइम्स नेटवर्कलाई उद्धृत गर्दै सबै भारतीय सञ्चारमाध्यमले विशोष प्राथमिकताका आधारमा यो खबर छापिरहेका छन् । स्रोतका अनुसार सार्पसुटर सलमानको घरबाहिर नै पुगेका थिए ।लरेन्स बिस्नोइ ग्याङबाट आफूलाई कुनै ख'तरा नभएको भन्दै सलमान शुक्रबार बिहान घरबाहिर साइक्लिङमा निस्किएको र उक्त समुहले सोही समयमा आ'क्रमण गरेको बताइएकोृ छ । जोखिम बढेको भन्दै सलमानको सुरक्षालाई कडा पारिएको भारतीय मिडियाले उल्लेख गरेका छन् । ग्याङका एक सदस्य तथा आरो'पी सिद्धेश
नाबालिकालाई सामूहिक बला’त्कारका गर्नेलाई जिउँ’दै जलाए
भारतको झारखण्डको गुमलामा बुधबार नाबालिगलाई सामूहिक बला'त्कार गरेको आ'रोप लागेका दुई जनालाई जि'उँदै जलाइएको छ । घट'ना भएको थाहा पाएपछि स्थानीय वासिन्दाले मोटरसाइकलसहित ती युवालाई मट्टितेल छर्किएर जला'एका हुन् । जसमध्ये एक जनाको मृ'त्यु भएको छ भने अर्का गम्भी'र घा'इते भएको भारतीय सञ्‍चार माध्‍यमहरुले जनाएका छन्। मृत्‍'यु हुनेमा सुनील उराव रहेका छन् भने घा'इते हुनेमा आशिष उराव रहेका छन् । गम्भी'र घाइ'ते आशिषको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। घट'नापछि गाउँ तना'वग्रस्त बनेको छ भने गाउँमा बाक्लो रुपमा प्रहरी परिचालन गरिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरुले जनाएका छन् । प्रहरीले बिहीबार बिहान गाउँका अधिकांशलाई सोधपुछ गरेको थियो । यस्तै,आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ । मध्यरात १२ बजेदेखि लागू हुने गरी निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको हो । समायोजित नयाँ मूल्यअनुसार पेट्
Jun92022 by Nepalay TimesNo Comments
सुर्खेतमा चार दिनदेखि बेप’त्ता बालिकाको श’व फेला
सुर्खेत / चार दिनदेखि हराइएकी एक बालिकाको श'व फेला परेको छ । जिल्लाको गुर्भाकोट नगरपालिका–५ धारापानी घर भएकी अन्दाजी ७ वर्षीय बालिका ग्रीस्मा विकको श'व मकै बारीमा फेला परेको हो । नेपाली काँग्रेसको वडा नम्बर ५ ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा शनिवार हजुरआमासँगै सहभागी विक सोही दिन हराएको जानकारी आफन्तले दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामप्रसाद घर्तीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार बालिकाको श'व विकको घरदेखि एकसय मिटरको दुरीमा मंगलबार बिहान फे'ला परेको हो । आफन्तले शुरुमा बालिका अन्य आफन्तको घर गएको हुनसक्ने अनुमान गरेपनि खोज्दै जाँदा नभेटिएपछि सोमबार मात्रै प्रहरीलाई खबर गरेको गुर्भाकोट नगरपालिका वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष लालबहादुर पुनले बताए । घट'नाबारे अनुसन्धान गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय छिन्चुको टोली घट'नास्थल पुगेको छ । बालिकाको मृ'त्युको कारण नखुलेपनि घ'ट
Jun82022 by Nepalay TimesNo Comments
पब्जी खेल्न नपाएपछि आक्रो'शित १६ वर्षीय छोराले आफ्नै आमाको गो'ली हानी ह'त्या गरेका छन् । त्यसपछि आमाको श"वसँगै तीन दिनसम्म घरमै बसे । उनले १० वर्षीया बहिनीलाई पनि ध'म्की दिए र घरबाट बाहिर निस्कन दिएनन् । श'व कुहिएपछि दु'र्गन्ध फैलिन थालेपछि सेनामा अधिकारी पितालाई आफैंले फोन गरेर आमाको ह'त्या गरेको जानकारी दिए । पिताको जानकारीपछि मंगलबार राती प्रहरीले श'वलाई घर बाहिर निकाले । नवीन कुमार सिंह, मूल रूपमा वाराणसीका, सेनामा एक जुनियर कमिसन्ड अफिसर हुन् । उनको पोस्टिङ पश्चिम बंगालमा छ । लखनउको पीजीआई क्षेत्रको यमुनापुरम कोलोनीमा उनको घर छ । यहाँ उनकी श्रीमती साधना ९४० वर्ष० आफ्ना १६ वर्षीय छोरा र १० वर्षीया छोरीसँग बस्दै आएकी थिइन् । छोराले मंगलबार राती बुबा नवीनलाई भिडियो कल गरेर आमाको ह'त्या गरेको बताए । उनले बुवालाई श'व पनि देखाए । नवीनले एकजना आफन्तलाई तत्कालै फोन गरेर घर घर प
किशोरीको मृ'त्युपछि बर्दियाको मधुवन क्षेत्र तना'वग्रस्त बनेको हो ।स्थानीयले टा'यर बालेर गुलरिया–राजापुर सडक अव'रुद्ध गरेका छन् । बाघको आ'क्रमणबाट बचाउन सुरक्षाको माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेपछि हिजो (सोमबार) साँझ प्रहरीले गो'ली चलाएको थियो । प्रहरीमाथि आक्र'मण हुन थालेपछि गोली चलाउनुपरेको प्रहरीको भनाइ छ । बाघलाई नियन्त्रणमा लिन माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका सर्वसाधारण र प्रहरीबीच झडप भएको जानकारी दिइएको छ । सडक खुलाउन लाग्दा भएको झडपमा गो'ली लागेर घाइ'ते मधुवन–२ की १८ वर्षीया नवीना चौधरीको मृ'त्यु भएको हो । काखीमुनि गो'ली लागेका राकेश चौधरीको उपचार हुँदैछ । एसपी वीरबहादुर शाहीका अनुसार स्थानीयको ढुंगामुढाबाट प्रहरीतर्फ पनि ९ जना घा'इते छन् । बर्दियाका वन्यजन्तुपीडितले सोमबार बिहानैदेखि सडकमा उत्रिएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए । साँझ ६ बजे ओराली बजारमा झड'प भएको हो । समस्य
Jun72022 by Nepalay TimesNo Comments
काठमाडौंः फर्पिङको जंगलमा मृत अवस्थामा भेटिएका एक युवक र युवतीको सानखत हुन सकेको छैन। सोमबार बिहान शव भेटिएको थियो। दक्षिणकाली नगरपालिका ५ स्थित पुरानो दक्षिणकालीको शेषनारायण जंगलमा अन्दाजी २१/२२ को पुरुष र महिला मृत अवस्था फेला परेका थिए। घटनाको जानकारी पाएपछि उपत्यका प्रहरी अनुसन्धान कार्यालय, प्रहरी बृत्त कीर्तिपुर र इप्रका फर्पिङबाट प्रहरी अधिकृतसहितको अपराध अनुसन्धान टोली खटिएको थियो। घटनास्थल नजिकैबाट प्रहरीले दुई वटा बिषादीको बट्टा समेत फेला पारेको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेशराज मैनालीले जानकारी दिए। त्यस्तै महिलाले लगाउने कपडासहितको जेब्रा झोला, सिम कार्ड झिकिएको मोबाइल फोन, सिम कार्ड, फेन्टाको दुई वटा खाली बोतल, पानीको बोतलमा आधा भरिएको अवस्थामा फेन्टा जस्तो देखिने तरल पदार्थ समेत भेटिएको छ। घटनाको थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शव पोष्ट
Jun62022 by Nepalay TimesNo Comments
प्रहरीले नै मिलेर व्यवसायीको ३५ लाख रुपैयाँ लुटपा’ट
काठमाडौं । लैनचौरमा प्रहरीले नै मिलेर व्यवसायीको ३५ लाख रुपैयाँ लुटपा'ट गरेको भेटिएको छ । घट'नामा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरी वृत्त मालिगाउँका हवल्दार सालिकराम नेपाली पक्रा'उ परेका छन् । यस्तै थप दुईजना प्रहरी अधिकारी फरार छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंका अनुसार लु'टपाटमा संलग्नता देखिएपछि नेपाली र नुवाकोटका पेम्बा तामाङ प'क्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई प्रहरी वृत्त, सोह्रखुट्टेको हिरासतमा राखिएको छ । गत ८ जेठमा सस्तोमा एक किलो सुन विक्री गर्ने भन्दै एक समूहले ती व्यवसायीलाई बोलाएको थियो । तर पैसा लिएर गएका उनी अज्ञात समूहबाट लुटपा'टमा परेका थिए । अनुसन्धानका क्रममा लुटपा'ट गर्ने समूहमा प्रहरीको समेत संलग्नता भेटिएको थियो । पक्राउ परेका दुवै जनाविरु'द्ध मुलुकी अपरा'ध (संहिता) को डाँ'का चोरी सम्बन्धी कसूरमा अदालतबाट ५ दिन म्याद लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ । गत ८ जेठमा सस
श्रीमतीको कारण झु’न्डि’एर म’र्न बा’ध्य नेपाल प्रहरीका एक जवान (हा’र्दि’क श्र’द्धा’ञ्जली (4832)
यी हुन् तारा एयरको दुर्घ’टनामा परेका २५ वर्षीय ‘को पाइलट उत्सव’ यस्तो छ उनको नालिबेली (4326)
मलद्वा’रमा लौरो घुसाउँदा मृ’त्यु प्रकरण : गीताको श’व उठ्यो, छोरीले गरिन् बाबुविरुद्ध उ’जुरी (2933)
कबड्डी ४ की नायिका मिरुनाले दर्शकलाई हानिन् थप्पड ! (1765)
“भाइ त फर्केर आइजन, ठिक छु भनेर खबर गर्देन भाइ प्लिज” (1504)
ट्रकको ठक्क’रबाट अटो चालकको मृ’त्यु, राजमार्ग अवरुद्ध गरेर प्रदर्शन (1273)
बिहेमा नबोलाउँदा बुहारीले गरिन् देवर र ससुराको ह’त्या ! यसरी भयो पर्दाफास (1229)
कतारमा आफ्नै साथीले च’क्कु हानेर नेपाली युवकको ह’त्या ! हार्दिक श्र’द्धान्जली (1145)
१.	यिनै हुन बिबाह गरेको दुई महिनामै क’रेन्ट लागेर अस्ताए कञ्चनपुरका २७ बर्षिय श्याम ! (10)
२.	आजदेखि एकल प्रयोग हुने प्लाष्टिक उत्पादन, बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध (7)
३.	अस्पतालका कर्मचारी बोकेको बस दुर्घ’टना हुदा एक जनाको मृत्यु, ४० घा,इते (3)
४.	धन्सारमा सुतिरहेकी १२ वर्षीया रेखा सदाका लागि अस्ताइन, परिवारमा रुवाबासी (1)